खानै नपाएर आएको जस्तो नजरले किन हेरिन्छ कोरियामा हामीलाई ?
म स्वयम्ले मेरो अधिकारको बारेमा आवाज उठाइन भने अरु कसैले मेरो अधिकारको निम्ति आवाज उठाउने बाला छैन। चुपलागेर बसेमा मेरो अधिकार प्राप्त हुनेवाला छैन। त्यसकारण मेरो अनि तपाईं हामी सबै प्रवासी मजदुरको हक अधिकारका निम्ति यो महिनाको १८ तारिक आइतवार सउलमा जम्मा हौ।
म आफु जन्मेको देशमा परिवारको साथमा बसि भबिस्यका सपनाहरु पूरा गर्न सक्ने भई दिएको भए यति टाढा बिदेशमा आउने थिइन होला। जिविकोपार्जनका लागि आफू बसोबास गरिरहेको ठाउँ छोडेर कोरिया आएर मजदुरी गरि ज्याला लिएर जिउन विवश प्रवासी मजदुर हुँ म।
कोरियामा प्रवासी मजदुरको निम्ति लागु गरिएको इपियसमा कम्पनी स्वईच्छाले परिवर्तन गर्न पाउने अधिकार छैन मलाई। सबै निर्णय मैले होइन कम्पनी मालिकले गर्ने गर्छ किनकि म कम्पनीसंग त्यस्तो सम्झौता गर्न बाध्य छु। मजदुर कानुन अनुसार मैले सेवा सुबिधा पाउनु ब्यबहार राम्रो गरिनु मेरो अधिकार हो।मजदुरी गर्ने क्रममा कुनै दुर्घटनामा नपरी स्वस्थ्य भई जिउने अधिकार छ मलाई। तर कोरियामा ठिक बिपरित ब्यबहार गरिन्छ म माथी सेवा सुबिधा र हक अधिकार माथी कुठाराघात गरिएको छ भने मजदुरी गर्ने क्रममा रोजगारदाताको लापरबाही (काम गर्दा सुरक्षा सम्बन्धि आवस्यक उपकरणको कमि) का कारण अकालमै ज्यान गुमाउन र अंगभंग हुन बिबस छु म।
प्लास्टिकको घर, कन्टेनरमा मानिस बस्न सक्छ त्यो पनि लाखौ भाडा तिरेर ? तर पनि म ट्वाइलेट, बाथरुम, पानी नभएको र गर्मीमा ४०/४० डिग्री तापक्रम भएको थोत्रो कन्टेनरमा लाखौ भाडा तिरेर बस्न बिबस छु।
के म मजदुरी गर्न कोरिया जवर्जस्ती आएको हु त ? अवस्य पनि होइन कम्पनीलाई मेरो आवास्यकता परेको भएर कम्पनीले लिएर आएको हु । तर म माथि जवर्जस्ती पसेको घुस पैठियाको जस्तो व्यबहार गरिन्छ। अपराधीक गतिविधि गर्ने अपराधी सोचिन्छ र खानै नपाएर आएको कंगाल जस्तो नजरले हेरिन्छ कोरियामा मलाई ।
के म यौन हिंसाको शिकार हुन, कुटपिट र गाली सहन कोरिया आएको हु त ?
कोरियन नागरिकलाई ठेगना सोधेकै भरमा जेल जानु पर्छ मैले तर कार्यस्थलमा म माथी कुटपिट,गाली गलौच, दुव्यवहार भइरहँदा प्रमाणित गराउन गाह्रो हुन्छ । के म बिदेशी भएकै भएर यसो भएको हो त ? म पनि अरु जस्तै मानिस अनि मजदुर हो।
अभद्र ब्यबहार गर्दा किन यस्को विरुद्धमा कुरा उठाउन सक्दिन त म ? म कोरियन नागरिक न भएकै कारणले किन मैले भेदभाव भोग्नु परेको होला ? कोरियन सरकारले प्रवासी मजदुरको आवस्यकता परेर ल्याएको भए पनि किन आवस्यकताका वस्तु र दासको जस्तो ब्यबहार गर्छ।